मदिराले कलेजोलाई कसरी हानी गर्छ ? यो बाट कसरि बच्ने ? यस्ता छन् डक्टरका सुझाव ! - VOICE OF NEPAL
२६ असार २०७६, बिहीबार ११:०३ 148 ??? ???????
भुक्तभोगीहरु भन्छन्, थोरै मात्रामा मदिरा सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छैन । अझ के पनि भनिन्छ भने ‘नियन्त्रित मात्रामा मदिरा सेवन गर्दा केही स्वास्थ्य लाभ समेत मिल्छ ।’ के यो कुरा सत्य हो रु मदिराको पनि मात्रा हुन्छ रु नियन्त्रित मात्रामा पिउने मदिराले फाइदा गर्छ त ?
मानौ तपाईं हरेक साँझ एक लाज पेग अर्थात २ स्मल पेग (लगभग ६० एमएल० पिउनुहुन्छ । यति मदिरा सेवन गर्दा तपाईंको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ रु त्यसले कलेजोमा कस्तो असर गर्छ ?
मदिराको असर कलेजोमा
हामीले पिएको कुनैपनि तरल पदार्थको प्रोसेसिङ कलेजोले गर्छ । मदिरा जब हाम्रो शरीरमा पुग्छ, तब कलोजेले यसको प्रोसेसिङ सुरु गर्छ । तर, कलेजोले एकै पटकमा धेरै मदिरा प्रोसेसिङ गर्न सक्दैन । जब जब तपाईं मदिराको मात्रा बढाउँदै जानुहुन्छ, त्यस अनुरुप कलेजोले प्रोसेसिङ गर्न सक्दैन । उक्त मदिरा पेट र सानो आन्द्रा हुँदै रगतमा घुलनसिल हुन पुग्छ । यसरी मदिरा मिसिएको रगत शरीरको अन्य अंगसम्म पुग्नुअघि कलेजोमा फिल्टर हुनुपर्ने हुन्छ ।
रगतमा घुलिएको यो रगत एक विशेष किसिमको इन्जाइम बन्न लाग्छ, जसलाई एसिडएल्डिहाइड भनिन्छ । यो इन्जाइमले तपाईंको कलेजोलाई नराम्ररी क्षति पुर्याउँछ । लामो समयसम्म धेरै मात्रामा मदिरा पिउने व्यक्तिको कलेजो विस्तारै विस्तारै खराब हुन थाल्छ । कलेजोले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म काम गर्न बन्द गरे भने व्यक्तिको जीवन समस्यामा पर्छ । र, उनलाई कुनै किसिमको गंभिर रोग लाग्न सक्छ ।
मदिरा पिएको कति समयमा कलेजो खराब हुन्छ ?
तपाईं मदिरा पिउनुहुन्न, तर ढुक्क हुने अवस्था छैन । अहिले तपाईं हामीले गर्ने खानपान निकै विषाक्त भइसकेको छ । त्यसमा अनेक किसिमको मिसावट, वोसो र केमिकल घुलिएको छ, जसले कलेजोलाई असर गर्छ । यद्यपी त्यो भन्दा चाडो असर चाहि मदिराले गर्छ । जब तपाईं मदिरा पिउन थाल्नुहुन्छ, कलेजो खराब हुन सुरु गर्छ ।
यदि तपाईं पहिलो सप्ताह ४ दिनमा ९० एमएल भन्दा बढी मदिरा पिउनुहुन्छ, यो अत्याधिक हो । यसरी धेरै मदिरा सेवन गर्दा सबैभन्दा पहिला कलेजो आसपासमा फ्याट जम्मा हुन थाल्छ । यसको कारण फ्याटी लिभरको समस्या हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले यही चरणमा मदिरा पिउन छाडेमा उनको कलेजो क्रमस सुधार हुँदै आउँछ ।
दोस्रो चरणमा मान्छे अल्कोहलिक हेवपाटाइटिस हुन्छ । यस चरणमा पनि यदि मान्छेले लगातार मदिरा सेवन गरिरहेमा उनको कलेजो सुन्नि थाल्छ । त्यसपछि क्रमस कलेजो ड्यामेज हुन थाल्छ । कुनैबेला यो समस्या निकै जटिल बन्छ र मान्छेको ज्यान नै जाने खतरा पनि रहन्छ । तर, यही चरणबाट मदिरा सेवन गर्न चटक्कै छाडेमा संभावित जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
तेस्रो तथा अन्तिम चरण
तेस्रो अर्थात अन्तिम चरणमा व्यक्तिलाई लिभर सिरोसिस हुन्छ । यसको अर्थ हो, कलेजो जुन सेल्सले बनेको हुन्छ, त्यो मृत्त हुँदै जानु । त्यसपछि कलेजोको कार्यसंचालनमा समस्या आउन थाल्छ । हेभी ड्रिंक गर्नुहुन्छ र यो क्रम निरन्तर दश बर्षदेखि चलिरहेको छ भने तपाईंलाई लिभर सिरोसिस हुने खतरा अत्याधिक रहन्छ । यस चरणमा पुगेपछि मान्छेको मृत्यु निश्चित छ ।
कलेजो मात्र होइन, अरु अंगामा पनि क्षति
यदि दिनहुँ एक लार्ज पेग मदिरा पिउनुहुन्छ भने त्यसले तपाईंको कलेजो मात्र खराब गर्दैन । अन्य अंगमा पनि समस्या निम्त्याउँछ । त्यसमा प्याक्रियाटाइटिस, डिप्रेसन, प्रजनन क्षमतामा कमी, उच्च रक्तचाप, मुख र कलेजोको क्यान्स, मोटोपन, स्नायु प्रणालीमा असर, स्ट्रोक आदि हुनसक्छ ।
के दिनहुँ एक पेग ९६० एमएल मदिरा सुरक्षित छ ?
थोरै मात्रामा वा नियन्त्रित मात्रामा मदिरा सेवन गर्दा कुनै असर गर्दैन भन्ने तर्क वैज्ञानिक छैन । यो मनगढन्ते तर्क हो । किनभने चाहे थोरै होस् वा धेरै, मदिराको सोझो असर कलेजोमा पर्छ ।
यदि तपाईं थोरै मात्रामा मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यसको असर अलि लामो समयमा देखिनेछ । यदि धेरै पिउनुहुन्छ भने त्यसको असर तुरुन्तै वा चाडै देखिनेछ ।
सत्य त के भने यदि तपाईं स्वास्थ्य रहन चाहनुहुन्छ भने मदिरा सेवन गर्नै हुन्न । जतिसुकै होस्, मदिराले हानी गर्छ ।
मदिरा सेवन नगरेर मात्र पनि पुग्दैन, अस्वस्थ्यकर खानपानले पनि तपाईंको कलेजोलाई उत्तिनै नोक्सान पुर्याउँछ । त्यसैले मदिरासँगै अस्वस्थ्यकर खानेकुरा पनि त्याग्नुहोस् ।
बेलामौकामा वा त्यस्तै संयोगमा एक, दुई सानो पेग मदिरा सेवन गर्नु त्यती धेरै हानिकारक नहोला । यो भनेको बर्षमा एकाध पटक मात्र हो । अन्याथा तपाईंलाई मदिराले नष्ट नै गर्छ ।
बच्चालाई पुग्ने गरी आमाको दूध आएन ? यसो गर्नुहोस्
के तपाई आफ्नो तौल कति छ भनेर सचेत हुनुहुन्छ? तपाइलाई थाहा छ, उमेरअनुसार तौल कति हुनुपर्छ ?
तुलसीको प्रयोगले निको हुन्छ यस्ता रोग !
दैनिक एउटा अमला खानुका यस्ता छन् फाइदाहरु
गर्भवती महिलाले के के कुरामा ध्यान दिने ?
तपाईलाई कब्जियतको समस्या छ ? पिउनुस् तातोपानी र मह !
यी हुन् बेसारका फाइदाहारु